‘मिसन मंगल’ले ६ दिनमा कति कमायो ? - Everest Dainik - News from Nepal
‘मिसन मंगल’ले ६ दिनमा कति कमायो ?
मुम्बई । बलिउड सुपरस्टार अक्षय कुमार चलचित्र ‘मिसन मंगल’ले बलिउड बक्स अफिसमा धमाका मच्याइरहेको छ । रिलिजको ६ दिनमा नै चलचित्रले १ सय करोड बढिको व्यापार गर्न सफल भएको छ। ६ दिनमा चलचित्रले १ सय १४ करोड कमाएको छ ।
याे पनि पढ्नुस फिल्म शूटिङका क्रममा अक्षय कुमार घाइते
बिहिबार प्रदर्शन भएको यस चलचित्रले पहिलो दिन २९ करोड १६ लाखको व्यापार गर्यो । शुक्रबार १७ करोड २८ लाखको मात्र व्यापार गरेको चलचित्रले शनिबार २३ करोड ५८ लाख कमायो । आइतबार, सोमबार र मंगलबार क्रमश २७ करोड ५४ लाख, ८ करोड ९२ लाख र ७ करोड ९२ लाख कमायो ।
यो कमाई अक्षयको अघिल्लो चलचित्र केशरीले दुई सातामा पुरा गरेको थियो । तर, यस चलचित्रले भने रिलिजको ६ दिनमा नै उक्त रेकर्ड तोडिदियो । बुधबारसम्मको व्यापारलाई अनुमान गर्दा चलचित्रले १ सय २५ करोड हाराहारीमा व्यापार गर्ने देखिन्छ । ‘मिसन मंगल’मा अक्षयको साथमा विद्या बालन, तपसी पन्नु, सोनाक्षी सिन्हा लगायतका कलाकारको मुख्य भूमिका छ ।
ट्याग्स: अक्षय कुमार, मुम्बई